Tuesday January 11, 2022 - 07:13:02
Wararka ka imaanaya gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in dagaal culus uu saaka ka dhacay deegaan dhanka waqooyi uga beegan magaalada Balcad.
Ciidamo aad u hubaysan oo katirsan wilaayada Sh/dhexe ayaa la wareegay gacan ku heynta deegaanka Qalimoow oo udhaxeeya degmooyinka Jowhar iyo Balcad.
Warar hordhac ah ayaa sheegaya in ciidamada jihaadiga ah ay cagta mariyeen saldhig ay maleeshiyaadka dowladda Federaalka ay ku lahaayeen Qalimoow waxayna daabusheen saanado melleteri.
Sida ay wararku sheegayaan weerarka lagu qaaday saldhigga Qalimoow waxaa ku dhintay ilaa 3 askari halka ay ku dhaawacmeen 4 kale, daqiiqado kadib qarax xooggan ayaa kolonyo katirsan ciidamada DF-ka lagula beegsaday wadada xiriirisa Jowhar iyo Qalimoow.
ilo wareedyo ayaa sheegaya in qarax oo beegsaday gaari Cabdi Bile ah ay ku dhinteen sedax askari, sarkaal lagu magacaabi jiray Taakoow Dhagey ayaa kamid ahaa sedaxda ruux ee ciidamada dowladda uga dhintay qaraxii lala helay kolonyada gurmadka ah.
Ciidamada ATMIS oo dad shacab ah ka qafaashay deegaanka Miirtaqwo.
Ciidamada maamulka 'Somaliland' oo la wareegay degmo 70Km ujirta magaalada Garowe.